Ngabe iSupermoon ibangela ama-tsunami? | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ngenxa yesathelayithi yethu, ubusuku kusukela ngeSonto kuya ngoMsombuluko babukhanya kakhulu kunokujwayelekile. Lo mbukiso, okuyi ayizange inikezwe iminyaka engama-70ihehe ukunakwa okuningi kusuka ezigidini zabantu, abangazange banqikaze ukuthatha omakhalekhukhwini noma amakhamera edijithali ukuthatha isikhathi esikhethekile.
Kodwa, Ngabe iSupermoon ihlobene nama-tsunami?
1 Kungani kwenzeka amagagasi?
2 Ngabe inyanga ingadala ama-tsunami?
3 Izithombe ezivela ku-Superluna 2016
Kungani kwenzeka amagagasi?
Isithombe - Umlando
Amagagasi ukuguquguquka ngezikhathi ezithile olwandle okubangelwa ukukhanga okuba khona emanzini emanzini. Njengoba isathelayithi izungeza uMhlaba, uquqaba lwamanzi luphakanyiselwa kuwo ngamandla alo ahehayo, ngenkathi ngasikhathi sinye lezo ezikuma-antipode nazo zikhuphuka ngenxa yamandla we-centrifugal wokujikeleza kweplanethi yethu.
Kulesi simo ilanga futhi lidlala indima ebalulekile, nalokho lapho ukukhanga kwenyanga nelanga kuhamba ohlangothini olufanayo, kuphakamisa amagagasi entwasahlobo; Ngakolunye uhlangothi, lapho ilanga nenyanga zikhanga ngendlela ebheke ngxi, kwakheka i-engeli elifanele, kwenziwa ama-neap.
Ngabe inyanga ingadala ama-tsunami?
Ukwazi lokhu, ungacabanga ukuthi inyanga ingadala ama-tsunami. Kepha… kuliqiniso lokho? Isathelayithi yethu ithatha cishe izinsuku ezingama-28 kuye kwangama-30 ukuzungeza umhlaba. Ngalezo zinsuku kudlula ngezigaba ezahlukahlukene (ezintsha, ezikhulayo, ukuncipha nokugcwala). Njengoba sibonile, amandla ayo akhangayo abaluleke kakhulu ekukhiqizeni amagagasi, okuyi ziqine lapho zigcwele ngokuba seduze kweplanethi.
Kodwa abukho ubudlelwano phakathi kwenyanga nama-tsunami, ngoba lezi yizinto ezenzeka ngenxa yokuzamazama komhlaba noma umthelela we-asteroid.
Izithombe ezivela ku-Superluna 2016
Ukuqeda, sikushiya nochungechunge lwezithombe zeSupermoon 2016. Zijabulele.
Isithombe - Jesse Chance
Isithombe - Fotosbermaxo.blogspot.com.es
Isithombe - Twitter @SecretosdeMadrid
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » Ingabe iSupermoon ibangela ama-tsunami?
Ngithole ukuthi isihloko sithakazelisa futhi nginezithombe ezinhle kakhulu engingazifunda
Ngiyajabula ukuthi ukuthole kuthakazelisa, Jazumy.